Ity no lalao faharoa natrehin’ny Barea ao amin’ny Vondrona B misy azy, ary ny fandresena azo androany dia mametraka an’i Madagasikara eo amin’ny laharana faharoa vonjimaika amin’io vondrona io, manana isa 4, aorian’i Nizeria izay manana isa 6, ity farany izay efa namany tafita any amin’ny ampahavalon-dalana. Laharana fahatelo vonjimaika i Guinée, manana isa 1, rehefa nanao ady sahala 2 noho 2 tamin’i Madagasikara tamin’ny lalao voalohany, ary resin’i Nizeria 1 noho 0 tamin’ny lalao faharoa omaly.
Naman’ny efa mangoron’entana kosa i Burundi na mbola manana lalao iray hatrehina amin’i Guinée aza ao anatin’ity fifanintsanam-bondrona ity.
Ady sahala amin’ny lalao farany hifanandrinany amin’i Nizeria hatao amin’ny alahady 30 jona 2019 dia ampy hiakaran’i Madagasikara ampilaminana amin’ny ampahavalon-dalana.
Horakoraka sy feon’anjomara no re nanerana an’Antananarivo renivohitr’i Madagasikara taorian’ny kiririoka faran’ny mpitsara ny lalao androany, ka nandresen’ny Barea an’i Burundi. Nisy nahavatra nanapoaka afomanga mihitsy aza, mariky ny hafaliana satria dia manan-tantara iny fandresena vitan’ny Barea androany iny, izay sambany mandray anjara amin’ny CAN.
« Félicitations zalahy à ! Misaotra tamin'ny lalao nampientanentana ! Manohana anareo hatrany ny Malagasy manontolo ! Tohizo ny ezaka sy filalao mihamivoatra hatrany fa mahafinaritra sy mahavelombolo ary mampisy ilay finoana fa tsy maintsy tonganareo aty ny amboara ! Alefa BAREA”, hoy ny filoha Andry Rajoelina taorian’ny lalao.